Ngọngọ mgbochi na ihe zuru oke: abs plastic, thermoplastic na nri ọkwa ihe. Onyinye ike ya na 36W 0.38A, akụkụ ngwugwu bụ 290 * 227 * 340mm, ụgbụ dị nha bụ 3.1kg. Nlekọta dị mfe - Nhicha dị mfe site na iji aka eji mmiri mmiri. Ọkpụkpụ mma a bụ ụzọ kachasị mma iji mee ka kichin kichin gị ma chekwaa oge gị. All-na-Otu Set, 5 mpempe mma tent na chopsti nwere ike disinfected na otu oge
UV tingcha Board Sterilizer Cabinet
UV Cutting Board Sterilizer Cabinet na-onwem 1-3pcs TPU mgbutu osisi nke bụ nje na mildew àmà na mfe ọcha. Full ọrụ na-eme ka ị na-na a ọzọ mma ndụ ịke. Mfe iji rụọ ọrụ, ịrụ ọrụ dị elu, na ọnụ ahịa dị mfe. Disinfection arụmọrụ elu 99.99%.